ओ अमेरिका  !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १८, २०७८ मनप्रसाद सुब्बा
कि एक तन्नेरी नेपाली भाषी कविले
तिमीलाई ठाडै काफरे भनेको छ  !
काफर त तिमी पक्कै नै हौ ।
भूतसँग डराएजस्तै भियतनामसँग डराउँथ्यौ
अहिले किम जोङ् उन् तिम्रो इन्सोम्निया भइराखेको छ ।
यौटा सानो टापु फेदरवेट बक्सिङ च्याम्पियनसित
तिमी हेबिवेट लगलग काम्छौ ।
कालो छालासित तिमी यस्तरी डराउँछौ
जसरी नानीहरु डराउँछन् अन्धकारसित ।
त्यो डर तिमी घुँडाको पांग्रामा बोकिहिँड्छौ
र, मौका पाउनासाथ
तिम्रो त्यो सेतो डर
कालो सुन्दर घिच्रो थिच्न झम्टिन्छ ।
फुटपाथमा हिँडिरहेकी मेरी एसियाली दिदीलाई
तिम्रो सेतो लातले भकुर्‍यौ
पूर्वेली घामले रन्केको उसको एसियाली अनुहारसित
तिमीलाई यत्रो डर ?
तिम्रो छालाको सेतो रङ त सेतो नै पनि कहाँ रहेछ र !
सातो उडेको सेतो पो रहेछ त्यो
कि अरु रङहरु देखेर सधैं तर्सिराखेको ।
रातो रगत कुदिरहेको राता अनुहारहरु देखेर
तिमी यति डरलाग्दो डरायौ
कि त्यो अनाम देशका राता इष्टदेव–देवीहरूलाई निमिट्यान्न नपारून्जेल
तिम्रो सेतो डर सेतोपन उडेको
सिसा भइरहृयो ।
तिम्रो सेतो डर यति हिंस्रक र आक्रामक छ
कि यो सधैं जाइलाग्छ मात्र ।
(डर नै डर पैदा गर्ने डरलाग्दो हुँदै जाँदोरहेछ ।)
तिम्रो विशालकाय चील अग्लो टावरमा बसेर
रहस्यात्मक ढंगले डर खिलखिलाउँछ– कु क्लक्स क्लाा... कु क्लक्स क्लाा...।
एकापट्टि बेल्टमा हतकडी र अर्कोपट्टि पिस्तोल भिरेर
के तिमी सारा संसारकै पुलिस बन्न खोजेको ?
पुलिस जो सत्ताकै एक कायर रुप न हो ।
तिमी पुलिस डेरेक सभिन
जसको घुँडामा ट्याटु गरेको मानचित्र
तर, जुन मानचित्रमा छ कालो टाटो जर्ज फ्लोयडको घिच्रोको
र, त्यो कहिल्यै नमेटिने टाटोको
अहिले टेनेसीदेखि मिनियापोलिससम्म
टेनेसी जहाँबाट वासिङ्टन डीसी पुगेर मार्टिन लुथर किङ जुनियरले
यौटा इन्द्रेणी सपना टाागेका थिए क्यालिफोर्नियादेखि भर्जिनियासम्म
त्यै सुगन्धित सपनासँग डराउनसम्म डराएर
तिमीले लुकेर त्यो सपनाको आँखा फुटाउन गोली चलायौ
तर, त्यो सपना त
मार्टिनको आँखाबाट असत्य आँखाहरुमा
सङ्कल्प बलिसकेको थियो ।
तिम्रा तेह्रवटा राता–सेता तेर्सा धर्काहरुले
तिमी डल्लै पृथ्वी बेह्रेर बाँधिराख्न चाहन्छौ
अनि तिनै धर्काको एक छेउमा
थुप्रेर बसेका पचासवटा ताराहरु
यही पृथ्वीको आकाशमा चकाचौंध चम्केर
पृथ्वीका सारा आँखाहरुलाई निभाउन चाहन्छन् ।
कि यो अमेरिकाको शक्ति हो
तर, म भन्छु
कि डरको योभन्दा भयंकर प्रदर्शनी अरु के हुन सक्ला र  !
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७८ १०:४१